Però: Nahazo ny Loka Nobel Literatiora i Mario Vargas Llosa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2010 9:04 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, srpski, বাংলা, Español, English
Nifoha tao amin'ny antsoina hoe “Vaovaon'ny taona” ny Peroviana ny alakamisy 7 oktobra : Nahazo ny loka Nobel eo amin'ny literatiora avy amin'ny Akademia Soedoà i Mario Vargas Llosa .
Teraka tamin'ny 1936 tany Arequipa i José Mario Pedro Vargas Llosa. Nisaraka ny ray aman-dreniny raha mbola zaza izy, ary nifindra niaraka tamin'ny fianakavian-dreniny ho any Cochabamba, Bolivia izy avy teo. Niverina tany Però ihany ry zareo rehefa voatendry tamin'ny toerana diplaomatika tany an-tanànan'i Piura any Però avaratra ny dadabeny. Tamin'ny fahafolo taonany no nifindrany ho any Lima. Tao izy no nifankahita indray tamin'ny rainy voalohany indrindra. hatramin'io fotoana io dia nino izy fa efa maty ny rainy.
Niditra nianatra tao amin'ny Akademia miaramila Leoncio Prado tany Lima izy, saingy niala an-daharana ka namarana ny fianarany tany Piura. Avy teo izy no tafiditra tao amin'ny Anjerimanontolom-pirenena ao San Marcos hianatra lalàna sy literatiora. Tamin'ny faha-19 no nanambadiany an'i Julia Urquidi izay zaobavin'ny anadahin-dreniny sady zokiny 13 taona. Mbola tanora dia tanora tokoa izy no nanomboka niasa tamin'ny fanaovan-gazety Peroviana.
Rehefa nahavita ny fianarany tamin'ny kolejy izy dia nahazo vatsim-pianarana hianatra tao amin'ny Anjerimanontolon'i Complutense ao Madrid, Espaina. Rehefa vitany io dia nifindra ho any Paris izy mivady. Nisaraka ry zareo tamin'ny 1964 ary nanambady ny cousine-ny Patricia indray rangahy. Telo ny zanany: Alvaro, Gonzalo ary Morgana.
Nirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena izy tamin'ny 1990 saingy resin'i Alberto Fujimori.
Nanapakevitra ny hanolotra ho an'i Vargas Llosa ny loka Nobel ny akademia noho ny “fipetrapetraky ny rafitry ny fahefana (nosoratany) sy ny endrika miharihary momba ny fiaretana mijoro, ny fikomiana ary ny faharesen'ny tsirairay.”
Mario Vargas Llosa tao amin'ny Cervantes Insitute tany New York ny7 Oktobra 2010, taorian'ny filazana fa azony ny Loka Nobel eo amin'ny Literatiora. Saripika tao amin'ny Flickr an'i Globovision, fahazoan-dalana voafaritry ny Attribution-NonCommercial 2.0 Generic Creative Commons.
Araka ny noheverina dia henika momba ity vaovao ity ny tontolom-bolongana Peroviana.
Ny bolongana Mate Pastor [es], an'i Juan Sheput, no nizarana ny tenin'i Vargas Llosa tao amin'ny fampielezam-peo iray:
Nanamarika [i Mario Vargas Llosa] fa efa miasa ao amin'ny biraony izy amin'ny 5:30 maraina, manomana ny lesony satria mpampianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Princeton izy raha niantso azy ny akademia Soadoà nampahafantatra fa afaka 14 minitra eo ho eo dia hatao ny filazana.
Nasongadin'i Mario Vargas Llosa fa nihevitra io ho kisangisangy izy, tahaka izay efa nanjò ilay mpanoratra Italiana Alberto Moravia taona vitsivitsy lasa izay.
Ny mpamaham-bolongana ao amin'ny Sophimania [es] kosa no nametraka lohateny manao hoe “Nahazo ny Loka Nobel momba ny Literatiora ihany i Vargas Llosa ny farany”:
Tamin'ny filazana voalohany nataony avy any Etazonia no nilazan'i Vargas Llosa fa “nanohina sy nahafaly azy tanteraka” ny nahazoany loka. Mipetraka any New York, noho ny fampianarany ao amin'ny Anjerminontolon'i Princeton manko ity mpanoratra Peroviana izay mizaka ny zom-pirenena Espaniola ity ihany koa.
Maneho ny zavatra tsy maintsy mandalo ao an-dohan'ny Peroviana maro ny bolongana Marcamasi [es], fanoratan'i Gustavo Alayza:
Izy no atao hoe Kandidà mandrakizay. Tsy maro ny fitaovam-pampitam-baovao no nanasongadina fa mety ho hafa ny amin'ity taona ity, nefa nomarihany ihany fa mety hisy izany. Zava-manaitra mahafaly ny toy itony. Nosafidiana ho Loka Nobel momba ny Literatiora 2010 i Jorge Mario Pedro Vargas Llosa.
C. Valcárcel, mpamaham-bolongana avy ao amin'ny Nos siguen pegando abajo [es], no milaza amintsika ny nahitany voalohany ny asa-soratr'i Vargas Llosa:
Tsy mbola ampy folo taona aho tamin'izany ary nahita tao amin'ny tranom-bokin'ny trano onenako ny Antolojian'ny fitantarana Peroviana. Noho ny fitandremako dia nanomboka tamin'ireo fitantarana fohy aho aloha ka namela ireo fitantarana lavalava ho amin'ny fotoana manaraka. Na izany aza ny farany izay tsy maintsy novakiako, izay any amin'ny faran'ny Antolojia, dia tsy lava loatra. namaky azy io aho taloha fa hitako ahitan-javatra hafahafa. Toy ny tantara foronina izy io ho ahy, mpianatra manohitra ny lehibeny (sekoly miaramila?). Nitondra ny lohateny hoe Los Jefes (Ny mpitarika) ny tantara ary nosoratan'i Vargas Llosa.
Ao amin'ny Twitter moa ny tenifototra #vargasllosa dia tsy mitsahatra ny voaresaka ary saiky naharitra 12 ora no naha-fironan-resaka manerantany ao amin'ny Twitter an'i “Mario Vargas Llosa”. Nanoratra i Luis Alejo Rojas, (@Quest048):
Rehefa mieritreritra fa nifidy an'i Fujimori isika Peroviana fa tsy i Mario Vargas Llosa; 20 taona aty aoriana ny iray any am-ponja ary ilay hafa kosa nahazo ny loka Nobel.
Mazava mihitsy fa “trome” [misondrotra] i Vargas Llosa, eny fa na dia tamin'ny nanomezany anarana ny zanany vavy aza dia “capo” [miavaka izy e] (Morgana), Izaho nanonona io zanany vavy io hoe Juanita
Fohy ny tenin'i Walter Meléndez (@amigoperu76) :
Avy any Peru aho… tanindrazan'i #VargasLlosa……..
Mananihany i Ricardo Feregrino (@iRickferegrino) :
Hita ankehitriny fa efa namaky an'i #VargasLlosa ny REHETRA ary tena faly tokoa.
Amin'ny 3 Novambra ho avy izao no hamoaka ny bokiny farany i 3, Mario Vargas Llosa, El sueño del celta, izay miresaka momba an'i Roger Casement. Mbola tsy misy moa ny lohateny amin'ny teny anglisy, fa azo heverina fa azo adika toy izao ny lohateny hoe Ny Nofin'ny Seltika.